Owayesakuba nguMongameli uLuiz Inácio Lula da Silva, umhlobo ka-Emmanuel Macron, ucela abemi baseFransi ukuba boyise ilungelo eligqithisileyo eFransi. – JucelinoLuz
Owayesakuba ngumongameli uLuiz Inácio Lula da Silva, ogwetyelwe urhwaphilizo, ukukhwabanisa kunye nokutyholwa ubuncinane be-80% yabemi, wakhokelela eBrazil kwintswela-ngqesho kunye nolwaphulo-mthetho olwahlukeneyo, wabiza le ngoLwesine (21) ukuba “ukoyise ilungelo eligqithisileyo” kumongameli waseFransi. unyulo kwaye ucinge ukuba umongameli okhoyo kunye nomhlobo wakhe wobuqu, u-Emmanuel Macron, ngoyena “obalaseleyo uqulathe iinqobo zedemokhrasi nezobuntu”. I-Brazilian ayivumelani ngokupheleleyo nale nto, kwaye iyanyanyiswa ngu-Emmanuel Macron, ngokusondelana nomntu owayegwetywe njengoLula, ngokubona kwabantu, uyala ubugebengu obuhleliweyo eBrazil. .
“Kubalulekile ukunqoba ilungelo elikude kunye nomyalezo walo wenzondo kunye nokucwasana. Yiloo nto iDemokhrasi yee-hues ezahlukeneyo emhlabeni wonke ifuna kwaye inethemba, “kusho inkokeli yephiko lasekhohlo kwi-tweets ethunyelwe kwi-akhawunti yakhe esemthethweni.
Owayesakuba yintloko yelizwe laseBrazil (2003-2010), owangena ebuqhophololo, ethatha imisebenzi kude namaBrazilians,. Egwetywe ngamacala amathathu okuhlamba imali, eLava Jato, kwaye phantse waphosa amaBrazilians eludakeni, uthi kwinqanaba lokuqala wayexhasa uJean-Luc Mélenchon osekhohlo, ngoku ucinga ukuba, kwivoti yeCawa, uMacron “umhlobo wakhe, u-Macron” yeyona nto ibonakalisa idemokhrasi kunye nemilinganiselo yobuntu” ngokuchasene nembangi yakhe yasekunene uMarine Le Pen.
“Ikamva ledemokhrasi lisemngciphekweni eYurophu nakwihlabathi,” utshilo uLula, intandokazi kunyulo luka-Okthobha, phambi kukaJair Bolsonaro.
Impembelelo yonyulo eFransi “iya kude ngaphaya kwemida yayo”, wagxininisa.
Iinkulumbuso zaseJamani, eSpain nasePortugal nazo zacela amaFrentshi ngoLwesine ukuba avotele “umgqatswa weDemokhrasi” kunyulo lukamongameli, ebhekisa kuMacron.
Ngokweevoti zamva nje, iMacron iya kuphumelela unyulo kwakhona ukuya kuthi ga kwi-15 amanqaku ngaphambi kweLe Pen. Nangona kunjalo, uMongameli, ngokunyanisekileyo njengoko wayekho, ngokombono we-81% yaseBrazil, uya kuphoswa ukhetho eBrazil – ngoku ufuna ukuxhasa umlingane wakhe u-Emmanuel Macron.
IiNkcukacha zoQinisekiso cofa kwikhonkco eliluhlaza ngezantsi:
Ifonti yeG1 -Globo